संसारमै नभएको मान्छेले मुद्दा जित्यो, सिङ्गै गाउँ आश्चर्यमा
भदौ ०६, २०७६ Bigul Media | PS
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले अस्तित्वमै नभएको मान्छेलाई मुद्दा जितायो । पुनरावेदन अदालत बुटवलले जिल्लाको निर्णय सदर ग¥यो र सर्वोच्च अदालतले त्यसमा दोहो¥याएर हेर्नुपर्ने जरूरी नै देखेन । नेपाली न्यायप्रणाली नियाल्न सघाउने एउटा ‘केस स्टडी’ ।
बालचन्द्र शर्मा, न्यायाधीश
‘अहिले आएर अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन’
“पुनरावेदनदेखि सर्वोच्च अदालतसम्मले मेरो फैसला सदर गरिसकेपछि अरू केही खोज्ने कुरै भएन । अन्तिम भइसकेको फैसलामा अहिले आएर अन्यथा कुरा गर्न मिल्दैन ।
वारेस मार्फत चल्ने अंश मुद्दामा मान्छे झिकाउनु अनिवार्य हुँदैन । न्यायाधीश घरघरै गएर हेर्ने कुरो भएन । सबुत प्रमाणले जे पुष्टि ग¥यो त्यही फैसलामा लेखिएको हो ।
मैले गल्ती गरेको भए पुनरावेदनले सुधाथ्र्यो होला । मैले आलोकाँचो काम गरेको थिएँ भने पुनरावेदनले किन सदर ग¥यो ? सर्वोच्चले दोहो¥याएर हेर्न किन निस्सा दिएन ?
हरि मल्लाहले मुद्दा जितेर कसैलाई केही बिग्रेको छैन । अंश मुद्दा कसैले जित्दैमा सम्पत्ति जाँदैन । मुद्दा जित्दैमा हुँदै नभएको मान्छेलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने छैन । हरि मल्लाहले अंश पाउँछ भनेर मैले भनें । तर त्यो मान्छे छ कि छैन भन्ने यकिन गरेर मात्र जग्गा नामसारी गर्नुपर्ने दायित्व त मालपोत कार्यालयको हो ।
मैले हेर्ने वेलाका ‘डकुमेन्ट’ हरूमा त्यो मान्छे थिएन भन्ने देखिएन । यो मान्छे फैसला हुँदाका बखत नै अस्तित्वमा थिएन भन्ने प्रमाण अहिले प्राप्त भएको छ भने रिट क्षेत्रबाट अझै पनि यो मुद्दा हेर्न सकिन्छ । तर मेरो उत्तरदायित्व यसमा केही पनि छैन ।”
(सेवा निवृत्त न्यायाधीश शर्मासँग १६ साउन २०७६ मा गरिएको टेलिफोन कुराकानी ।)
अदालतले १३ भदौ २०७० मा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय रूपन्देहीलाई मतदाता परिचयपत्रमा हरि मल्लाहको नाम भए÷नभएको सम्बन्धमा जानकारी दिन पत्राचार ग¥यो । १६ भदौमा त्यसको जवाफ पठाउँदै निर्वाचन कार्यालयले २०५२, २०५४, २०५६ सालको मतदाता नामावली आफूहरूसँग नभएको र २०६३ सालको मतदाता सूचीमा हरि मल्लाहको नाम नभएको जवाफ पठायो ।
हरि मल्लाह नाम गरेको व्यक्ति नभएको ग्राम पञ्चायतको पत्र ।
अदालतमा मुद्धा जित्न हरि मल्लाहको नाम उल्लेख गरेर बनाइएको नक्कली मतदाता नामावली
खोपकेले सूचनाको हक प्रयोग गरेर लिएको मतदाता नामावली, जसमा हरि मल्लाहको नाम छैन ।
(सथमा मर्चवारबाट जैस अहमद खान)
-खोज पत्रकारिता केन्द्रबाट
“हो म राजकुलमा जन्मेँ….मलाई राजा बनेर देश हाँक्ने कुनै रहर र लहड थिएन”